ပင်မသင်တန်းများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းနဲ့အတူ Caramelized ဝက်သားနံရိုး
အပေါ် Posted 23.11.2018
အရသာဝက်သားနံရိုးဟင်းချက်သည်းခံခြင်းလိုအပ်သည်။ ကြာကြာအမဲသားကို၎င်း tastier ထုတ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, မီးဖုတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးပေါ်ဝက်သားအပြင်ပေါများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်စံနမူနာအရသာကွဲပြားခြားနားသည်။ Excellent ကဝက်သားနံရိုးအတွက်ရရှိခဲ့ကြသည် ...
ယူကရိန်းအစားအစာ: Benderiki အသား - စာရွက်
အပေါ် Posted 17.11.2018 17.11.2018
Benderiki အများဆုံးမကြာခဏယူကရိန်း၏အနောက်ဘက်ဒေသများတွင်ပြင်ဆင်ကြ၏။ တကယ်တော့သူကအသားနှင့်အတူကျပ် pancakes ပါပဲ။ သို့သော်အစဉ်အလာမဟုတ် - လိပ်နှင့်ခေါက်တြိဂံ။ Benderiki များအတွက် Stuffing အရည်ရွှမ်းခဲ့ ...
ခရစ္စမတ်ကြက်ဆင်ဘေကွန်, ဘီစကွတ်များနှင့်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူကျပ် - စာရွက်စူပါပါ!
သင်ရုံထိုကဲ့သို့သောကြက်ဆင်ပေါ်မှာထားလျှင်သင့်ရဲ့နှစ်သစ်ကူးရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ, တစ်ဦးကိုမှန်ကန်နတ်သမီးပုံပြင်တူပါလိမ့်မယ်။ , Big အရည်ရွှမ်း, စိတ်ကျေနပ်စရာနှင့်အလွန်အရသာရှိတဲ့! မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များ၏ 7-8 စားသုံးခြင်းများအတွက်: 1 ကြီးမားကြက်ဆင် ...
အပေါ် Posted 07.11.2018
ငါဒိန်ခဲနဲ့အရသာရှိတဲ့ကြက်သားကိုခံစား? ဘယ်ဟာပိုအထူးဖြစ်စေလျက်, တစ်ပန်းကန်၏အရသာကိုဖြည့်ကြမည်နည်း ထိုအခါသင်သည်ဒိန်ခဲဘောလုံးနှင့်အတူကြက်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်ချဉ်းကပ်မည်! ပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အတူတန်ဆာများကို ပြင်. အိမ်ထောင်စုလှော်ကြက်သားအစာကျွေးဖို့ ...
ပေါ်တူဂီအစားအစာ: အဖြူပဲမျိုးစုံနှင့်အတူဆန်စာရွက်နှင့်ဝက်အူချောင်း lingvisa
ပေါ်တူဂီချက်ပြုတ်ပဲမျိုးစုံနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများမပါဘဲစိတ်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ခက်ခဲ bean ကိုဟင်းချို, သုပ်, ဘေးထွက်ဟင်းလျာများတစ်ထောငျတစာရွက်လည်းရှိတယ်။ ငါးနှင့်အသားနှင့်အတူပဲမျိုးစုံအမျိုးမျိုး။ ဒါဟာသားညှပ်ပေါင်မုငါးပိ, စင်ကြယ်သောမွှေးအချိုပွဲအဘို့အပင်ဖြည့်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူအဖြူပဲ - အပြည့်အဝစာရွက်, ပျေါတူဂီအစားအစာ Explore ။ အဆိုပါပန်းကန်တစ်ခုလွတ်လပ်သောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအပါအအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကြက်သွန်, paprika နှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူဝက်စူးရှသောက်သည်ဝက်အူချောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီ၌, ဝက်အူချောင်း၏ဤအမျိုးအစား lingvisa (linguiça) ကိုခေါ်။ , အဲဒီအစား, သငျသညျကိုအခြားအသုံးပြုသို့မဟုတ်ပင်သောက်သည်အသားနိုင်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအတွက်ပဲမျိုးစုံ၏စာရွက်များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ချက်ပြုတ်အဖြူပဲတစ်အိုးတလုံး, 200 ဆဝက်အူချောင်း, မုန်လာဥနီ, ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီကိုအဘို့အ 1 အရာ; လတ်ဆတ်သော parsley ၏စည်း; 200 ဂရမ်ဆန်။ ခြောက်သွေ့တဲ့ပဲမျိုးစုံသုံးစွဲဖို့တစ်စာရွက်ပါလျှင်ပဲဟင်းချက်သင်တန်းတစ်ခုလုံးနေ့အဘို့ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာချက်ပြုတ်ပြီးတော့, 12 နာရီထက်မနည်းက dunk ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင်တို့မူကားအဆင်သင့်ကိုသုံးနိုင်သည် - ချက်ပြုတ်ပဲမျိုးစုံ၏အိုးအချိန်အများကြီးကယ်တင်မည်။ အိုးထဲမှာပဲ, ပဲထဲမှာခွေးဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားကစားမှ overcooked မဟုတ်ခဲ့သောအဓိကအရာ။ တူညီသောကွန်တိန်နာအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးမြောက်ရန်စတင်ထံမှပန်းကန်။ (မြေထဲပင်လယ်မီးဖိုချောင်သံလွင်ဆီထဲမှာကြော်အသုံးပြုသည်) ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူကြက်သွန်နှင့်မုန်လာဥနီအချပ် Overcook ။ ဆန်လောင်း။ ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေသို့မဟုတ်ဆူပွက်ဟင်းရည်တစ်လုပ်နိုင်တဲ့သွန်းလောင်း။ , နှိုးဆော်အရသာစစ်ဆေးနှင့်ပဲမျိုးစုံထည့်ပါ။ ကုန်တယ် parsley နှင့်အတူဖျန်း်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုမီဆန်ဘို့အသငျ့ဆုံးဖြတ်ရန်လိုလိုလားလား။ ရုံ ...
multivarka အတွက်အာလူးကြော်ဖို့ဘယ်လို? ကြော်အာလူး multivarka နိုင်ရန်အတွက်, သင် program ကိုမုန့်ဖုတ်သို့မဟုတ်ကြော်အသုံးပြုရမည်။ အချိန်ဟင်းချက်အာလူးမော်ဒယ်၏တန်ခိုးနှင့်လိုက်သည်ကိုအာလူးရဲ့ပြင်းအားအပေါ်မူတည်သည်။ ...
အဆိုပါချဉ်ဝက်သားဝမ်းသို့မဟုတ်ပေါင်ခြံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အကြံပြုအမဲသားကိုထမင်းချက် podcherevok ၏အလွှာနှင့်အတူဘေကွန်နှင့်အတူခေါ် podcherevok ။ အဆီများ၏အတွင်းပိုင်းတွင် 4st ဆားသွန်းလောင်း။ 1kg ဇွန်းနဲ့အနီရောင် ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက် aldente ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
aldente ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုဘယ်လိုချက်ပြုတ်နည်း ငါအပြည့်အဝချက်ပြုတ်သည်အထိချက်ပြုတ်ကြဘူး, ပြီးတော့ငါရေခဲအကြောင်းကိုရေအေးအောက်မှာချပြီးအကြောင်းကိုမသိရပါဘူး။ အောက်ပါအတိုင်းချက်ပြုတ်သည် - ကျွန်ုပ်သည် zucchini (သို့မဟုတ်) zucchini ကိုဖြတ်ခဲ့သည်။
နို့နှင့်အတူဆန်သို့မဟုတ်ပြောင်းဆန်ဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? Kaki မဆိုစိတ်ကောင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများအလေ့အကျင့်ရှိထွက်ကြိုးစားခဲ့ကြသလဲ
နို့နှင့်အတူဆန်သို့မဟုတ်ပြောင်းဆန်ဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? Kaki မဆိုစိတ်ကောင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများအလေ့အကျင့်ရှိထွက်ကြိုးစားခဲ့ကြသလဲ အရမ်းကောင်းသောခွက်နှင့်ဇွန်းမဟုတ်တိုင်းတာသည့်အခါကျွန်မမျက်စိနှင့်အရသာအပေါင်းတို့နှင့်တကွအပေါ်ပေါ့ ...
ဒါကြောင့်ဆားသို့မဟုတ် Pickled မှိုနှင့်အတူအာလူးကြော်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ?
ဒါကြောင့်ဆားသို့မဟုတ် Pickled မှိုနှင့်အတူအာလူးကြော်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ? မီးဝေး (သူတို့မလိုအပ်ပါဘူးကြော်) ချဉ်မှိုနှင့်အတူကြော်အာလူးတစ်အာလူးဖြစ်နှင့် Pickled နှင့် Marine မှိုနှင့်အတူကစားနိုင် ...
crumbly ခဲ့ကြောင်းပုလဲမုယောစပါးကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ပြီနောက်ဟင်းအတွက် grit ကိုစုပ်ယူနှင့်ကအားလုံးနီးပါး turbidity (စီရီရယ်၏ရထားများအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်သောဤမုန့်ညက်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်တိုင်အောင်ရေနှင့်ရောစပ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့စီးအောက်၌ဖုံးထား ...
ကြက်သား gizzards ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာ?
ကြက်သား gizzards ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာ? Esch အလွန်ကောင်းသော retseptik) ကွင်းနဲ့ကြော်ထဲသို့လှီးဖြတ်ကြက်သွန်နီ, မုန်လာဥနီ TSURE add, နည်းနည်းကြော် esch ။ ထို့နောက်ထပ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် julienne ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်းမှပေးပို့နှင့် ...
ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အတွက်ဟင်းရည်ကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ ကျွန်တော့်မုန္လာဥနီသည်အရသာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရောင်ပြောင်းသွားစေရန်အတွက်ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥနီ၊ အနည်းငယ်ချက်ပြုတ်သောဆန်၊
အသား stuffing ချိုနှင့်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို
ဘယ်လိုအသား stuffing ချိုနှင့်ချက်ပြုတ်ဖို့ကြက်သွန်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိနှင့်အတူ minced အသားကြော်, ပြုတ် horns, ကဦးချိုနှင့်အတူရရှိလာတဲ့အသားရောမွှေဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သင်ရုံဘေးကဖို့အမဲသားကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ် ...
အသုံးဝင်သော mussels ထက် ??
mussels ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။ ပင်လယ်စာအားလုံးလိုပဲသူတို့ဟာပရိုတိန်းတွေ၊ mussels အားလုံးသည် bivalve mollusks များဖြစ်သည်။ mussel အသားများသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံး ၀ င်သောဂလိုင်ကရိုပါဝင်သောအရာအားလုံးထက်သာလွန်သည်။
pilaf ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို? ဆန် crumbly ဖြစ်ခဲ့သည်။
pilaf ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို? ဆန် crumbly ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီထက်ရေလိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ချက်ပြုတ်နေစဉ်အဖုံးဖွင့်လှစ်မ pilaf နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ကြပါဘူး။ ငါရေ solnkyu သင်္ဘောသဖန်းအတွက်နာရီဝက်အပေါ်ပေါ့ ...
ဆန်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သူကအဝါရောင်အရောင် preobrel သလော ငါနနွင်းဒါမှမဟုတ်ဘာကိုထည့်သွင်းဖို့နှင့်အတူကြားသိ?
ဆန်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သူကအဝါရောင်အရောင် preobrel သလော ငါနနွင်းဒါမှမဟုတ်ဘာကိုထည့်သွင်းဖို့နှင့်အတူကြားသိ? သာရွှေဝါရောင်နှင့်အရောင်နဲ့အရသာကိုပေးနိုင်ပါသည်။ နနွင်းအရသာအရောင်ပေးသည်, ဒါပေမယ့်မရ ... ။
စကျင်ကျောက်အမဲသားကဘာလဲ?! ဤတွင်ရှိမိမိတို့အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပေး http://www.kamentorg.ru/ ကောင်းတစ်ဦးစကျင်ကျောက် ... အဆီပါးလွှာအလင်းတန်းများဖြာနှင့်အတူအမဲသားလည်းမရှိ။ ဖန်တီးတဲ့ဖက်တီးအလွှာနှင့်အတူဤအသား ...
အရသာရှိတဲ့နှလုံး, အသည်းနှင့်အဆုတ်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို? ဝက်သား
အရသာရှိတဲ့နှလုံး, အသည်းနှင့်အဆုတ်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို? ဝက်သားတဖန်သင်တို့ bovine ကြက်ဥစားရန်မကြိုးစားခဲ့တာလဲ ဖြတ်တောက်သျော သာ. ကောင်း၏))) ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီလိုအမှုအရာကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအရသာမသိရပါဘူး။ ) ဟုပြောပါ ...
မြစ်ငါးကနေငါးကိတ်မုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါဘယ်လိုနေသလဲ? မျိုး၏အဘယ်အရာကိုမျှ။ မှာအားလုံးငွေမရှိသောလည်းမရှိသည့်အခါ Shoplifter stuffing ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နံ့သာမျိုးနှင့်အခြားသူများကိုထည့်သွင်းဖို့ဘောဇဉ် grinder အတွက်သေးငယ်တဲ့ rybshki ကြိမ်2လှည့်ကွက် ... ။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 37 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,359 စက္ကန့်ကျော် Generate ။